Musharax Cali Ciid oo kusii jeeda Dhuusomareeb iyo diyaar garow lagu soo dhaweenayo oo Socda – Banaadir Times
Musharax Cali Ciid oo kusii jeeda Dhuusomareeb iyo diyaar garow lagu soo dhaweenayo oo Socda
By banaadir 13th January 2020 178
Waxaa la filayaa in dhawaan magaalada Dhuusomareeb ee caasimada maamulka Galmudug gaaro Musharax Cali Maxamed Ciid oo u taagan qabashada xilka Madaxweyne kuxigeenka maamulka Galmudug.
Musharaxa oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa magaalada Muqdisho ayaa la filayaa in uu gaaro magaalada Dhuusomareen si halkaasi uga bilaabo ololihiisa doorashada kursiga Madaxweyne kuxigeenka.
Sida aan wararka ku heleyno magaalada Dhuusomareeb waxaa ka socda diyaar garow xoogan oo lagu soo dhaweenayo Musharaxa Madaxweyne kuxigeenka Galmudug, taageerayaasha Musharaxa ayaana sugi la’ imaanshihiisa.
Musharax Cali Ciid ayaa ah ninka koobaad ee loo saadaalinayo in uu noqdo Madaxweyne kuxigeenka Galmudug, waxaana musharaxan la sheegay in uu taageerayaal badan ku dhax leeyahay Baarlamaanka cusub sidoo kale dowlada federaalka ay raali ka tahay.
Doorashada ka dhaceysa Dhuusomareeb ayaa la saadaalinayaa in ay kusoo bixi doonaan Sadex Musharax oo kala ah Gudoomiyaha Baarlamaanka oo la filayo in loo doorto Dr Maxamed Nur Gacal, Madaxweynaha oo isna loo saadaalinayo Axmed Cabdi Kaariye Qoor qoor halka Madaxweyne kuxigeenka isna aad loo saadaalinayo in uu noqdo Cali Ciid.
Puntland oo dad u qabatay qarax khasaaro geystay